နှစ်စဉ် ကျင်းပမြဲဖြစ်သော World Wood Day အခမ်းအနားကို ယခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ အိမ်ရှင်အဖြစ် မန္တ?? - Yangon Media Group
နှစ်စဉ်ကျင်းပ မြဲဖြစ်သော World Wood Day အခမ်းအနားကို ယခုနှစ်တွင် မြန် မာနိုင်ငံမှ အိမ်ရှင်အဖြစ် ဧပြီ ၆ ရက်မှ ၈ ရက်အထိ မန္တလေးမြို့ မြို့တော်ခန်းမ၌ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသ ကြီး သစ်တောထွက်ပစ္စည်းလုပ် ငန်းရှင်များအသင်းထံမှ သိရသည်။ သစ်သည် ဂေဟစနစ်အရ အကျိုးပြုသော renewable biomaterial ဖြစ်ကြောင်း မီးမောင်း ထိုးပြရန်နှင့် အနာဂတ်ကာလတိုင် ထာဝစဉ်တည်မြဲမှုတွင် အရေးပါ ကြောင်းကို အသိပညာပေးရန် လူမှုလှုပ်ရှားမှုအသွင်ဖြင့် World Wood Day ကို နှစ်စဉ် မတ် ၂၁ ရက်တွင် ကျင်းပလျက်ရှိရာ ယခု နှစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျင်းပ ခြင်းဖြစ်သည်။
မန္တလေးမြို့၌ကျင်းပမည့် World Wood Day အခမ်းအနား နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဧပြီ ၂ ရက် နံနက် ပိုင်းက ဒိုင်းမွန်းပလာဇာ သုံးလွှာရှိ ICT Park တွင် သတင်းစာရှင်းလင်း ပွဲကျင်းပခဲ့ကာ သစ်နှင့်ပတ်သက် ၍ ဆိုင်ခန်းပြခန်းပေါင်း ၁၃ဝ ကျော် ပါဝင်ပြသသွားမည်ဖြစ် သည်။ World Wood Day အ ခမ်းအနားကို Greater Mekong အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေမှာ နှစ်စဉ်အလှည့် ကျ ကျင်းပနေတယ်။ World Wood Day ပွဲဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုပြယုဂ်ကို ပြန် လည်သတိရစေဖို့ ပေါင်းကူးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ် ခြင်း၊ အသိပညာဗဟုသုတများ သင်ယူခြင်း၊ မျှဝေခြင်းအတွက် အရမ်းကောင်းတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲလုပ်ခြင်း အားဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ လူနေ မှုဘဝ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အနာဂတ် အတွက် သစ်နဲ့သစ်တောထွက် ပစ္စည်းတို့ရဲ့ အရေးပါမှုအကြောင်း ပိုမိုသိရှိနားလည်မှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး သစ် တောထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးရဲမင်းသူက ပြော ကြားသည်။
ယခုနှစ်ကျင်းပမည့်အခမ်း အနားတွင် ဒေသခံပန်းပုပညာရှင် ၂ဝ – ၃ဝ ခန့်ကို ဒီပွဲမှာဖိတ်ကြား ကာ ပြိုင်ပွဲကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပြီး ပထမဆုရရှိသူကို လာမည့်နှစ် Europe ၌ ကျင်းပမည့် Europe အတွက် Europe ပေး ဖိတ်ခေါ် သွားမည်ဖြစ်ကာဒုတိယနှင့် တတိ ယရရှိသူများကိုလည်း အနာဂတ် ၌ကျင်းပမည့် နိုင်ငံခြားပွဲများသို့ ခေါ်ဆောင်သွားရန်ရှိသည်။ အခမ်းအနားတွင် ပန်းပုထု ခြင်း၊ ပွတ်လုံးဖော်ခြင်း၊ ပရိဘောဂ ပြုလုပ်ခြင်း စသည့်သစ်သားဆိုင် ရာ လက်မှုပညာများ လက်တွေ့ပြု လုပ်ခြင်း၊ သစ်သားဒီဇိုင်းနှင့် architecture program များ၊ ရိုးရာ လက်မှုပညာလုပ်ငန်းများ၊ ကလေး ငယ်များနှင့်ပတ်သက်သည့် ပညာ ပေးအစီအစဉ်များ၊ သစ်နှင့်ပြုလုပ် ထားသော အနုပညာပစ္စည်းပြပွဲ များနှင့် သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်းတို့ ပါ ဝင်မည်ဖြစ်သည်။
'ကိုယ် သရုပ်ဆောင်ထားတာကို သူများတွေ ကြည့်တော့မှာဆိုတော့ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် တော်တော် ရှက??
ရန်ကုန် ဒလ မြစ်ကူးတံတားကို မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်း အာဏာပိုင် လက်အောက်ရှိ Port Area Limit အတွင်း တည်ဆောက်မှု ဆိ
မြောက်ကိုရီးယားကို ခြိမ်းခြောက်ရန် အမေရိကန် လေယာဉ်တင် သင်္ဘောများ စစ်ရေးလေ့ကျင့်
မန္တလေးမြို့ပေါ်တွင် သိန်းငှက် စစ်ဆင်ရေးဖြင့် လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာတွင် တစ်လကျော် အတွင်